Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: March 2011
သျှမ်းတပ်နဲ.ဗမာတပ်တစ်ရက်တာတိုက်ပွဲတွင်ဗမာတပ်ဘက်မှ(၁၀)ယောက်ကျဆုံး၊အယောက် ၄၀ ဒဏ်ရာရ၊
အစသာအနှောင်းနာတဲ့အခြေအနေကိုဆိုက်ရောက်နေသောဗမာစစ်တပ်ဟာသျှမ်းတပ်ဖွဲ.၏ပြောက်ကျားတိုက်ပွဲကြောင့် ၂၈ ရက်နေ.တစ်ရက်တာတွင်တော်တော်အထိနာသွားပြီးဗမာတပ်ဘက်မှ ၁၀ ယောက်သေဆုံးပြီးအယောက် ၄၀ လောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါသည်၊စစ်ပစ္စည်းသယ်ဆောင်ရာတွင်အသုံးပြုထားတဲ့မြင်းတွေ၊လားတွေ ၁၅ ကောင်လောက်ကိုလည်းသေဆုံးသွားပါသည်၊တပ်သားများကလည်းတကွဲတပြားစီးထွက်ပြေးကုန်ကြသည်၊ဗမာတပ်ဘက်မှသယ်ဆောင်လာသည့်လက်နက်ကြီးတွေကလည်းအသုံးမဝင်သလိုဖြစ်သွားပါပြီ၊အခြားသောသတင်းတိုတစ်ပုဒ်အရ၊သျှမ်းတပ်မှရဲဘော်များသည်သျှမ်းဘာသာစကားအပြင်မွန်စကားရော၊က၇င်စကားရော၊ကချင်းစကားရော၊က၇င်နီစကားရောအကုန်လုံးပြောတတ်တယ်လို.ဆိုပဲ၊ထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့၊
For Immediate Release 30th March 2011
သျှမ်းရွာတွေကိုဗမာစစ်တပ်ကမီးရှို.နေပုံ(ရုပ်သံကြည့်ရှူရန်) Burma Troop Burn Shan Village in Shan State of Burma
တစ်ရွာလုံးမီးလောင်နေတယ်၊ The whole village were burned to the ground. It is sad.
မာတ်ခ်ျလ ၂၅ ရက်နေ.မှာလူထုအုံကြွမှုအစားငလျင်အုံကြွမှုဖြစ်ပွား၊ပြည်သူများအားပန်းကြားချင်တဲ့စကား
မာတ်ခ်ျလ ၂၅ ၇က်နေ.ဟာဗမာပြည်အတွက်ထူးဆန်းသည့်နေ.တစ်နေ.ဖြစ်သည်၊လူထုအုံကြွမှုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို.ယူဆခဲ့သည်၊သို.သော်၊ယင်ကဲ့သို.ဖြစ်မလာဘဲငလျင်မြေကြီးအုံကြွမှုဖြစ်လာတယ်ကိုဝမ်းနည်းစွာတွေ.မြင်ခဲ့သည်၊နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်နေပြည်တော်၊မန္တလေး၊အပါအဝင်အထက်ပိုင်းတစ်လျှောက်မှာအကျိုးဆိုးများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်၊အကြောင်းမူကား၊ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသာသနာထွန်းကားနေသည့်နိုင်ငံတွေမှာဗုဒ္ဓ၏ပညတ်တော်တွေကိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူများချိုးဖောက်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်၊ပဉ္စနန္တရိယကံငါးပါးကိုကျူးလွန်ခြင်း၊ဥပမာ၊ဗုဒ္ဓဘုရားအားသွေးစိမ်းတည်အောင်အန္တရာယ်ခြင်း၊၊ဘုရားစေတီပုထိုးများဖျက်ဆီးခြင်း၊ဓါတ်တော်တွေကိုဖျက်ဆီးရောင်းစားခြင်း၊အမိအရင်းကိုသတ်ဖြတ်ခြင်း၊အဖအရင်းသတ်ဖြတ်သူ၊ဗုဒ္ဓသားတော်ရဟန်းသံဃာတော်များအချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်သွေးထိုးရန်တိုက်ပေးသူ၊ရဟန္တာကိုသတ်သူ၊
ရဟန်သံဃာတော်များကလည်းပါရာဇိက ၄ ပါးကိုမထိန်းစောင့်ခြင်း၊ဥပမာ=မေထုန်မှီခြင်း၊ရဟန္တာလိုလိုတင်စားခြင်း၊ခိုးဝှက်ခြင်း၊လူသတ်ခြင်းနဲ.လူသတ်တရားဟောကြားသတ်ခိုင်းခြင်း၊
ပုထုဇန်ကလည်း လူကျင့်ဝတ် ၁၀ ပါးကိုချိုးဖောက်ခြင်း၊ဥပမာ=တောကိုမီးရှို.ခြင်း၊ပြားအုံးဖျက်ဆီးခြင်း၊လူသတ်ခြင်း၊မုဒိန်ကျင့်ခြင်း၊
တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်သည့်လူကလည်း မင်းကျင့်တရား ၁၀ ပါးနဲ.အညီမအုပ်ချုပ်ဘဲ မင်းကျင့်ဝတ်ကိုချိုးဖောက်ခြင်း၊ဥပမာ=တိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်ကြင်နာတရားမဲ့ခြင်း၊ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေကိုဆန်.ကျင့်ခြင်း၊ပြည်သူတွေကိုအခွန်အတုတ်အမျိုးမျိုးဖြင့်ညှင်းဆဲခြင်း၊အမျက်ဒေါသထွက်ခြင်း၊သီလးငါးပါးရှစ်ပါးမတည်စောင့်ခြင်း၊ဖြောင့်မတ်မန်ကန်စွာမကျင့်သုံးခြင်းတို.ဖြစ်သည်၊
ထို.ကြောင့်၊အစိုးလုပ်သူတွေကရဟန်းရှင်လူပြည်သူလူထုကိုသတ်ဖြတ်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ထားပြီးအုံကြွမှုဖြစ်မလာနိုင်အောင်သတ်မယ်ဖြတ်မယ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ပြည်သူများကအုံကြွမှုမလုပ်နိုင်တော့ဘဲအုံကြွမှုအစားတရားနဲ.စိတ်ဖြေလိုက်သည်၊အဲဒီလိုစိတ်ဖြေလိုက်တော့တိုင်းပြည်စောင့်နတ်တွေကပြည်သူလူထုကိုယ်စားတာဝန်ယူပြီးဗုဒ္ဓပညတ်တော်အားချိုးဖောက်သူများကိုဒဏ်ခတ်တော့မည်ဖြစ်၍ပညတ်တော်မချိုးဖောက်သည့်သူများအတွက်ဘာမှစိတ်တုန်လှုပ်ခြောက်ချားစရာမလိုဘဲစိတ်အေးအေးထားသီလစောင့်ကြပါ၊မကြာခင်တော့အချိန်ကာလမှာမင်းတရား ၁၀ ပါးနဲ.အညီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မည့်မင်းတရားအစစ်အမှန်ပေါ်လာတော့မှာဖြစ်ကြောင်းသူတော်ကောင်းများအားအသိပေးလိုက်ပါသည်၊
သျှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်းဗမာစစ်တပ်မှစစ်ဗိုလ်များပြည်သူ.ပစ္စည်းများလုယက်ဓါးပြတိုက်နေသည်ဟုပြည်သူများပြော၊ Burma Army committed Terrorist Acts in Shan State, Burma.
The following is full report from Shan Herald Agency for News
Tuesday, 22 March 2011 13:04 S.H.A.N.
Since 22 February, travel between the Monghsu gemland and the rest of Shan State has been restricted. But since 13 March, when the Burma Army launched the offensive with at least 19 battalions on the Shan State Army (SSA) North that had turned down its “One country one military” program, the situation has turned from bad to worse in Monghsu and its neighboring townships: Kehsi. Tangyan and Mongyai.
The following are the first reports that have reached SHAN from the conflict zone:
Nampook village, Phak Narm village tract, Kehsi township
မာတ်ခ်ျလ ၉ ရက်နေ.မှာ လကာင်္းအခြေစိုက်ဗမာစစ်တပ်မှရွားသားပိုင်းနွားတစ်ကောင်ဆွဲသွားပါသည်၊မာတ်ခ်ျလ ၁၄ ရက်နေ.မှာလည်းနောက်နွားတစ်ကောင်းဆွဲသွားပြန်ပါသည်၊လျော်ကြေးငွေတစ်ပြာမှမရ၊
On9March 2011,acow worth 500,000 kyat ($500) was taken by the Langkher-based battalion (number of unit unidentified) for food. Later on 14 March 2011, another cow worth 600,000 kyat ($600) was taken from the main village, Phak Narm. There was no compensation.
မာတ်ခ်ျလ ၁၅ ရက်နေ.မှာဗိုလ်ချုပ်မင်းမင်းလှိုင်ကစိတ်ဒေါသတကြီးနဲ.မင်းတို.လာတာတယ်နောက်ကျပါလားဆိုပြီးရွာသူကြီးကိုလက်သီးနဲ.ထိုးပြီးခြေထောက်နဲ.အကြိမ်ပေါင်းများစွားကန်လိုက်သည်၊
On 15 March, Maj Min Min Hlaing, commander of the unit, summoned Loong Sai, 50, headman of Wanwarp to Nampook. On his arrival, the major accused him of being late and punched his face and kicked him several times. His soldiers later visited Loong Sai and asked him to stay calm as the major wasahabitually short tempered person.
Namlao, Mongkao tract, Tangyan township
မာတ်ခ်ျလ ၁၆ ရက်နေ.တွင်သျှမ်းတပ်မတော်ဆုတ်ခွာသွားပြီးနောက်ရွာသားကလေး၊လူကြီးလူအိုးနဲ.အမျိုးသမီးများအယောက် ၁၀၀ လောက်ကိုခြေမြန်တပ်ရင်း ၃၃ နဲ.ခြေမြန်တပ်ရင် ၂၉၁ မှဖမ်းဆီးပြီးစစ်စခန်းမှာချုပ်နှောင်ထားပါသည်၊နောက်တစ်ရက်တွင်းလူငယ်များကိုဆင့်ခေါ်ပြီးသတင်းမပေးသည့်အတွက်ကြောင့်သျှမ်းတပ်ကိုအကူအညီပေးနေတယ်ဆိုပြီးရွာသူကြီးတစ်အိမ်တွင်းဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားသည်၊တောအုပ်တွင်ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေသည့်ရွာသားအယောက် ၅၀၀ ၏အိမ်တွင်းကျန်ပစ္စည်းများကိုဗမာတပ်ကသိမ်းယူလိုက်သည်၊အနည်းဆုံးကားအစီးပေါင်း ၅၀ လောက်ရှိသည်၊
On 16 March 2011, after the SSA had retreated from Namlao, more than 100 villagers, most of them women, children and the elderly people, were detained at the military camp. The occupying force was made up of Infantry Battalion 33 (Mongkao-based) and Infantry Battalion 291 (Lashio-based).
On the next day, young people in Mongkao were summoned and detained atavillager’s house in Namlao. They were accused of assisting the rebels by not giving information to the Army.
Asaresult, more than 500 people had fled and taken refuge in the jungle. Their left behind possessions were ransacked and looted by the soldiers. At least 50 motor vehicles were taken each for his own
Markman village, Kehsi township
မာတ်ခ်ျလ ၁၈ ရက်နေ.တွင်းဗိုလ်ချုပ် အေးအောင်ဦးစီသည့် ခလရအမှတ် ၅၇၈ ကအောက်ပါပစ္စည်းများကိုအတင်းယူဆောင်သွားပြီးငွေတစ်ပြာမှမပေးခဲ့၊
အရက် ၅၀ ပုလင်း တန်ဘိုး ၅၀၀၀၀ ကျပ်
ကြက် ၁၅၀ ကောင် တန်ဘိုး ၄၀၀၀၀၀ကျပ်
ချက်ဆီ ၅ ပုံအပြည့် တန်ဘိုး ၁၇၀၀၀၀ ကျပ်
အချိုမှုန်. ၁၀ ထုပ် တန်ဘိုး ၂၀၀၀၀ ကျပ်
ဆန် ၁ တောင် တန်ဘိုး ၂၀၀၀၀ ကျပ်
နောက်တစ်နေ.တွင်း သူတို.တပ်က ပတပ်ရွာကိုရောက်သွားပြီးလှည်တစ်စီးခေါ်ဆောင်ပြီးပစ္စည်းပို.ခိုင်းပါသည်၊လှည်ပိုင်ရှင်ကသျှမ်းတပ်ရဲ.သတင်းကိုမပြောပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရိုက်ခံရသည်၊အသက် ၄၅ နှစ်ရှိစိုင်းပီး လက်သီးနဲ.အထိုးခံရပြီးတုတ်နဲ.လည်းအရိုက်ခံရသည်၊သွေးကျတဲ့အထိရိုက်သည်၊အသက် ၂၅ နှစ်စိုင်းအောင်ကိုလည်းရိုင်ဖယ်သေနတ်ဒေါင့်နဲ.အထုခံရပြီးနှာဖူးကွဲသည်၊ပြီးတော့၊အရက် ၅၀ ပုလင်း၊ချက်ဆီ ၂၀ ပုလင်း၊အချိုမှုန်. ၁၀ ထုပ်၊ချက်အိုး ၁၀ လုံး၊ဘုရားရုပ်ထု ၃ ဆောင်တို.ကိုလည်းယူသွားပါသည်၊
On 18 March 2011, Maj Aye Aung of Light Infantry Battalion 578 (Langkher-based), 67 strong, took the following items without paying:
Liquor 50 bottles Price K 50,000 ($50)
Chicken 150 Price K 400,000 ($400)
Cooking oil5pails Price K 170,000 ($170)
Ajinomoto 10 bags Price K 20,000 ($20)
Rice 1 tang Price K 20,000 ($20)
On the next day, he and his men arrived at Pa Tep village and commandeeredabullock cart for use. The owner Sai Pi, 45, and another youth Sai Aung, 25, were beaten as they had no information about the rebels.
Sai Pi was punched, kicked and beaten withapiece of wood used asafence stake, until he was drenched in blood. As for Sai Aung, he was hit on his forehead witharifle stock.
They also took 50 liquor bottles, 20 bottles of cooking oil,5cooking pots, 10 Ajinomoto bags and3Buddha images from the village.
(၁၉၈၈) ခုနှစ် လူထု အုံကြွမှု အရေးအခင်းကြီးမှာ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ အသုံးချခံဘ၀ကို ရောက်ရှိခဲ့ရတဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်အကြောင်းကို ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ တပ်မတော်သား တစ်ဦးက နောင်လာနောင်သားတွေ သိရှိစေဖို့ အဖြစ်မှန်ကို မချွင်းမချန် ကျွန်တော် ကိုဖိုးတရုတ်ထံ ယခုလို ရေးသားပေးပို့လာပါတယ်။ ယခုလို ပေးပို့လာတဲ့ တပ်မ (၂၂) မှ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ခဲ့ရတဲ့ ဆရာကံကို ကျွန်တော် ကိုဖိုးတရုတ်မှ အထူးကျေးဇူး တင်ရှိပါတယ်။
ရှစ်လေးလုံးနဲ့ စက်တင်ဘာ အာဏာသိမ်း လူသတ်ပွဲ အတွေ့အကြုံများ
(၁၉၈၈) ခုနှစ် သြဂုတ်လက ဘားအံမြို့မှာ လူထုတွေဆန္ဒပြနေပြီး နာရီစင်အနီး ဘုရားကြီးဝင်းထဲမှာ သပိတ်စခန်းဖွင့်ထားပါတယ်။ အဲဒီသပိတ်စခန်းကို (၂) ရက်အကြာနံနက် (၀၃း၀၀) နာရီအချိန်မှာ ကျနော်တို့ တပ်ရင်းက တပ်ခွဲ (၂) ခွဲနဲ့ သွားဝိုင်းရပါတယ်။ ဘုရားကြီးဝင်းအတွင်းက ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူထုကို အပြီးအပိုင် မောင်းထုတ်ခိုင်းပြီး၊ မထွက်ပါက ပစ်ခတ်ရန်အတွက် အဲဒီအချိန်က အမှတ် (၂၂) ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ် တပ်မမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်လှက အမိန့် ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားကြီးဝင်းအတွင်းက လူထုအားလုံး ကြောက်လန့်ပြီး အ၀တ်တထည် ကိုယ်တခုနဲ့ ထွက်ပြေးကြပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဘုရားကြီးဝင်းအတွင်းကျန်ခဲ့တဲ့ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ မီးစက်များအားလုံးကို တပ်မမှူးမှ သိမ်းဆည်းခိုင်းပါတယ်။ ဒါတွေကို (တပ်မ) ပိုင် ပစ္စည်းလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ပိုင်းမှာဘဲ တပ်မ (၂၂) ကို တပ်ရင်း (၅)ရင်းနဲ့ ထုတ်နှုတ်ပြီး ရန်ကုန်ကို ရှေ့တန်းထွက်ရမယ်လို့ အမိန့်ရတဲ့အတွက် တပ်ရင်း(၅)ရင်း ရန်ကုန်မြို့ကိုသွားရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်ဟာ အမှတ် (၂၂) ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းတစ်ရင်းမှာ စစ်သက် (၁) နှစ်ခွဲရှိတဲ့ လူသစ်ဘဝသာ ရှိပါသေးတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ကို ပါသွားတဲ့တပ်ရင်းတွေကတော့ ခမရ (၂၀၄) မြိုင်ကလေး၊ ခမရ (၂၀၅) မြိုင်ကလေး၊ ခမရ (၂၀၇) သိမ်ဇရပ်အနီး၊ ခမရ (၂၀၈)၊ ခမရ (၂၁၀) တို့ ဖြစ်ပြီး တပ်ရင်း (၅) ရင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ ရောက်တဲ့အခါ တပ်ရင်းအလိုက် နေရာချထားပေးပါတယ်။ (၁) မြို့တော်ခန်းမ ဆူးလေ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တပ်ရင်းတစ်ရင်း
(၃) အသံလွှင့်ရုံ၊ (၈) မိုင်လမ်းဆုံမှာ တပ်ရင်းတစ်ရင်း
(၅) သာကေတမှာ တပ်ရင်းတစ်ရင်း နေရာချသတ်မှတ်ပေးထားပြီး အောင်ဆန်းကွင်း၊ သုဝဏ္ဏကွင်း၊ ကျိုက္ကဆံကွင်းများကိုတော့ စစ်ဒေသမှူး၊ ဗျူဟာမှူးများကို နေရာ ချထားပေးပါတယ်။
အဲဒီတပ်များဟာ မြို့နယ်အလိုက် တာဝန်ယူရပါတယ်။ မိမိတပ်ရင်းတာဝန်ကျတဲ့ မြို့နယ်အလိုက် ကားနဲ့ တနေကုန် လှည့်ပေးရပြီး တပ်ခွဲတစ်ခွဲမှာ စစ်ကားကြီး (၃) စီးတွဲ၊ ကားပေါ်မှာ မိုက်တလုံးစီချိတ်၊ ကားဘေးဘယ်ညာ သံဆူးကြိုးခွေ (၂) ခွေစီချိတ်ဆွဲထားပါတယ်။ ဒီသံဆူးကြိုးခွေဟာ လူထုအုံကြွတဲ့အခါ လူထုအလယ်မှာ ကားမောင်းသွားပြီး သံဆူးကြိုးခွေ ဖြေချဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး တပ်ရင်းအလိုက် နေ့၊ ည လူထုနှိမ်နှင်းဖို့၊ ရိုက်နှက်ဖို့၊ ပစ်ခတ်ဖို့ သင်တန်းတက်ရပါတယ်။ အဲဒီ သင်တန်းတက်တဲ့အခါ အဓိက ပစ်ခတ်ရေး၊ ရိုက်နှက်ရေးမှာ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစစ်သည်တွေကို ရွေးချယ်ပြီး၊ ပစ်ခတ် ရိုက်နှက်လို့ သေကြေ ဒါဏ်ရာရသူများကို ဗမာလူမျိုး စစ်သည်တွေက လူနာကောက် ကားပေါ် ပစ်တင်ဆိုပြီး တာဝန်ပေးထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ စတင် ပစ်မိန့်ပေးတဲ့ နေ့မှာ မြို့တော်ခန်းမနဲ့ ဆူးလေဘုရား တဝိုက်မှာ လူထုတွေ ရာနဲ့ချီသေပြီး ဒဏ်ရာရသူများကိုလည်း မသေမရှင် ကားပေါ်ပစ်တင်ကာ တာမွေသင်္ချိုင်းက ပေ (၅၀) ပတ်လည် ဘူဒိုဇာနဲ့ တူးထားတဲ့ ကျင်းထဲကို သွန်ချပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ မသေတဲ့လူလည်းအများကြီး ကျင်းထဲသွန်ချပြီး ဘူဒိုဇာကားကြီးနဲ့ မြေဖို့ပါတယ်။ အဲဒီကျင်းထဲမှာ လူထောင်နဲ့ချီ ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ အဲဒီနားမှာ တပ်ခွဲတစ်ခွဲ ပတ်လည် စောင့်နေရပါတယ်။
အသံလွှင့်ရုံနားမှာလည်း ပစ်ခတ်လို့ သေကြေဒဏ်ရာရကြတာ အများကြီးပါဘဲ။ အင်းစိန် ဘီပီအိုင်၊ အာအိုင်တီမှာလဲ အဲဒီလိုဘဲ ပစ်ရပါတယ်။ တောင်ဥက္ကလာပ၊ သာကေတ ကုန်းကျော်တံတား၊ သာကေတ ကျောက်တိုင်အနီး၊ သံလျင်တံတား၊ မြောက်ဥက္ကလာ န၀ဒေးလမ်းဆုံ၊ မြောက်ဥက္ကလာ ကုန်းကျော်တံတား၊ သင်္ဃန်းကျွန်း စံပြဈေး အနားတဝိုက်။ အဲဒီနေရာတွေအားလုံး လူထုတွေ သေကြေ၊ ဒဏ်ရာရသူ အများဆုံး ပစ်ခတ်မှုအများဆုံး နေရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သွားသွန်တဲ့နေရာကတော့ အဲဒီတနေရာဘဲ သိပါတယ်။
အဲဒီ (၈၈) လူထုဆန္ဒပြပြီး ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းတဲ့အချိန်မှာ တပ်မှူးတွေက ဒဏ်ရာရတဲ့လူထုတွေ၊ သေတဲ့ လူထုတွေ ဆီမှာ ပါလာတဲ့ငွေတွေ၊ လက်စွပ်တွေ၊ ဆွဲကြိုးတွေ၊ နားကပ်တွေကို သူနဲ့ရင်းတဲ့ရဲဘော်တွေကို အတင်း ဖြုတ်ခိုင်းပါတယ်။ တချို့တပ်မှူးတွေဆို ရွှေတွေ ငွေတွေအများကြီး လူထုထံက လုယက်ဖြုတ်ယူတာ တွေ့မြင်ရပါတယ်။ အရေးအခင်း ကာလမှာ နေ့ ည လမ်းပေါ်မှာ လူ (၅) ယောက်ထက်မစုရ၊ (၅) ယောက် ထက်စုပြီး စကားပြောမိရင် ချက်ချင်းဖမ်း၊ ကားပေါ်ခေါ်တင်၊ ရဲစခန်းပို့၊ အမှုဖွင့်၊ ငွေဒဏ်ရိုက်ပါတယ်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် ၁၂ လပိုင်းလောက်မှာ ကျနော့်တို့တပ်မ ကကျန်တဲ့ (၅) ရင်းပေါင်းပြီး ပထမ (၅) ရင်းကို သွားချိန်းပေးရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ရန်ကုန်မြို့မှာ နည်းနည်းတော့ ငြိမ်သွားပါပြီ။ အဲဒီအချိန် ရောက်တော့ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လူထုတွေ (၂၂) ဆိုတဲ့ဘက်တံဆိပ်ကိုတွေ့ရင် အလိုလိုနေရင်းနဲ့ ကြောက်နေကြပါတယ်၊ နောက်ပြီး တော့ မုန်းလဲမုန်းကြပါတယ်။
ကျနော်တို့တပ်တွေကို ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်က ဘယ်နားမှာ အများဆုံးဖြစ်သလဲ၊ ဘယ်ရပ်ကွက်မှာ အများ ဆုံးဖြစ်သလဲ၊ ဘယ်နားမှာ လူဆိုးတွေများသလဲ၊ အရက်သမားများသလဲ။ အဲဒါကို စစ်ကားကြီးနဲ့ တလမ်းဝင် တလမ်းထွက် လိုက်ပတ်ခိုင်းပါတယ်။ သွားတဲ့အချိန်မှာ ရဲဘော်ကိုယ်စီ ဒိုင်းတစ်ခုစီ၊ နံပါတ်ဒုတ်တစ်ချောင်းစီ ပေးထားပါတယ်။ စစ်ကားဖြတ်သွားတဲ့အချိန် လမ်းပေါ်မှာမူးနေတဲ့လူတွေ တွေ့ရင်၊ ကားနားဖြတ်လာတဲ့ လူတွေတွေ့ရင် ဆင်းရိုက်ခိုင်းပြီး မေးမြန်းမှုမရှိ ကားပေါ်ခေါ်တင် ကြိုးနဲ့တုပ် စစ်ဆေးမှုမရှိ ရဲစခန်းအချုပ်ထဲ သွားထည့်ပါတယ်။ တချို့ အရပ်သားတွေဆိုရင် ဘာမသိ ညာမသိ အဖမ်းဆီးခံရ၊ အရိုက်နှက်ခံရ၊ အချုပ်ခံရပါ တယ်။ တချို့ဆို ကြည့်လို့မရရင် ဘာအပြစ်မှမရှိဘဲ အရိုက်နှက်ခံ အထိုးကြိတ်ခံရတယ်။
လူကြီးဆိုတဲ့လူဟာ ရဲ၊ ရဝတတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး ဘာမှမဖြစ်တဲ့ လူထုတွေကို ဖမ်းဆီး အမှုဖွင့်၊ လူထုထံက ဘယ်လောက်ကုန်ကျတယ်ဆိုပြီးညှိ ငွေတောင်းတယ်၊ ပြီးတော့ မျှဝေယူတယ်။ ဒါကို ကျနော်တို့ အောက်ခြေ အားလုံးသိတယ်၊ ပြောပိုင်ခွင့်မရှိ၊ မပြောရဲပါဘူး။ နောက်ပြီး ညတိုင်း ညတိုင်း ကျနော်တို့အောက်ခြေ အိပ်ရေး ပျက်ရပါတယ်၊ ရပ်ကွက်အလိုက် တစ်အိမ်ဝင် တစ်အိမ်ထွက် ဧည့်စာရင်း စစ်ခိုင်းပါတယ်။
တပ်ခွဲမှူးလုပ်တဲ့လူဟာ ရဝတရုံးမှာ သောက်စား၊ ပျော်ပါးပြီး အောက်က ငယ်သားတွေကို ဒီည လူဘယ်နှစ်ယောက် ဖမ်းလာခဲ့ဆိုရင် ရအောင် ဖမ်းလာရတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ လူဦးရေ မပြည့်မချင်း မိုးလင်း အောင် ဧည့်စာရင်း စစ်ရတယ်။ ဧည့်စာရင်းစစ်တာက နာမည်ခံပါဘဲ၊ အပြစ်မရှိတဲ့လူထုတွေကို လိုက်ဖမ်း ဒဏ်ငွေတောင်းပြီး ပြန်လွှတ်တာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ရဝတ က သူကြည့်မရတဲ့လူတွေ၊ စားနိုင်သောက် နိုင်တဲ့လူတွေကို မှတ်ထားပြီး တပ်ခွဲမှူးလုပ်တဲ့သူကိုပြော၊ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ အောက်ခြေကို သွားဖမ်းခိုင်း၊ အမှုဖွင့်၊ ဒဏ်ငွေ တောင်းပြီး ပြန်လွှတ်၊ ဒီလိုဘဲ လုပ်နေတာပါဘဲ။ တပ်ရင်းမှူးလုပ်တဲ့လူက ဒီတစ်လအတွင်းမှာ တပ်ခွဲမှူးတွေ ငွေဘယ် လောက်ရှာပေးရမယ်၊ ဘယ်လောက်အပ်ရမယ်ဆိုတာလည်း သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ကျနော့်တို့တပ်ရင်းတွေ ရန်ကုန်ရောက်တော့ ဆန္ဒပြရင် ဖြိုခွင်းဖို့ဆိုပြီး ဖြိုခွင်းရေးသင်တန်း တက်ရပါ တယ်။ ပထမအကြိမ် တပ်ရင်းက တပ်ခွဲလိုက် ထုတ်နုတ်အင်အား ထုတ်နုတ်ပြီး အင်းစိန် အာအိုင်တီ ကျောင်းဝင်းမှာ (၇) ရက်တိတိတက်ရပါတယ်။ အဲဒီသင်တန်းမှာ ပစ်ခတ်တဲ့ (၁၀) ယောက်အဖွဲ့ (၃) ဖွဲ့၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် (၂) လံကွာ တန်းစီရပ်ပြီး ကားပေါ်မှာ စက်လတ်တစ်လက်စီ တင်ထားပါတယ်။ ပစ်တဲ့နေရာမှာ ပထမတန်း ကျည်တစ်ဘောက်စီ မတ်တပ်ရပ် ပစ်ပြီးတာနဲ့ ဒုတိယတန်း ရှေ့ကိုပြေးတက်ပြီး နေရာယူ ဒူးထောက် ပစ်ခိုင်းပါတယ်။ တတိယတန်း မှောက်ပစ်အဖွဲ့လဲ အဲလိုပါဘဲ။ ပြီးတာနဲ့ ကားပေါ်ရှိ စက်လတ် အဖွဲ့ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမအကြိမ် အဲဒီသင်တန်း အာအိုင်တီကျောင်းဝင်းမှာတက်ပြီး ဒုတိယအကြိမ် သုဝဏ္ဏကွင်းမှာ အဲဒီလိုဘဲ ပြန်တက်ရပါတယ်။ နောက်ပြီး တပ်ရင်းတိုင်း တပ်ခွဲတိုင်းမှာ အနီးကပ်တိုက်ခိုက်ဖို့ တိုင်ကွမ်ဒို၊ ကရာတေး၊ ကရာတေးဒို၊ ဂျူဒို ဆိုတဲ့ အနီးကပ် တိုက်ခိုက်ရေးသင်တန်း တက်ခိုင်းပါသေးတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ရဲဘော်တွေ ဘယ်ဘဲသွားသွား သေနတ် အီကွစ်မင့် အပြည့်အစုံ၊ ဒိုင်းတစ်ခု၊ နံပါတ်တုတ်၊ ဖိုင်ဘာဦးထုပ်၊ လှံစွပ် နေ့စဉ် အသင့်ပြင်ခိုင်းထားပါတယ်။
အဲဒီအချိန် ရဲဘော်တစ်ဦးစီ တပ်ဆင်မှုမှာ ကျည်ဆံ (၂၅၀) တောင့်၊ ဘောက် (၅) ဘောက်၊ လှံစွပ်တစ်ချောင်း၊ လက်ပစ်ဗုံးတစ်လုံးစီနဲ့ နိုင်လွန်ကြိုးခွေ တစ်ချောင်းစီတို့ ကိုယ်စီ တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ဧည့်စာရင်းစစ်တာ အကြောင်းပြ၊ အချိန်မတော် အိမ်ပေါ်တက်၊ အိပ်နေတဲ့ မိသားစုခြင်ထောင်ကို အတင်းဆွဲလှန်၊ တချို့မိသားစု တွေဆို ဖင်ပေါ်ခေါင်းပေါ်၊ တချို့တပ်မှူးတွေဆို သက်သက်မဲ့ ဧည့်စာရင်းအကြောင်းပြပြီး လူထုတွေကို ဒုက္ခပေး ခဲ့ကြပါတယ်။
တချို့ရဲဘော်တွေ တပ်မှူးတွေဆို အဲသလိုအိမ်တွေပေါ်မှာ လှပပြီးမျက်နှာသစ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေဘာတွေတွေ့ရင် အိမ်ရှင် မသိအောင် ခိုးယူသွားသေးတယ်။ ဒါကို ကျနော်တို့က တိုင်းရင်းသားရဲဘော်တွေဆိုတော့ ဘာကိုမှ ပြန်မပြောရဲဘဲ နည်းနည်းပြောသံထွက်ခဲ့ရင်လည်း ပါးရိုက်ခံရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာဆို လူကြီးတွေ အဆင့်လိုက် စီးပွားဖြစ်ပြီး လူထုအပေါ်အမြတ်ထုတ်၊ အောက်ခြေအဆင့် ဘာမသိတဲ့ရဲဘော်တွေကို အမိန့်ပေး ခိုင်းနေတာကိုယ်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို လူထုအများစုက နားလည်ကြပါတယ်။ အောက်ခြေကို လူထုတွေက သနားကြပါတယ်။ ကျနော့်ဆို တချို့လူထုတွေနဲ့ မိဘရင်းလို ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုအလုပ်မျိုး မလုပ်ချင်ဘဲ လုပ်နေရတယ်ဆိုတာ အားလုံး ရှင်းပြလို့ လူထုများလည်း သဘောပေါက်ကြပါတယ်။အဲဒီတုန်းကဆိုရင် အထက်လူကြီးတွေ ခိုင်းတိုင်း၊ ပြောတိုင်း လုပ်နေရတာကို မလုပ်နိုင်ဘူး ငြင်းဆန်ခဲ့ရင် ရိုက်နှက်ပြီး ထောင်ထဲ ချက်ချင်း ထည့်ခံရပါတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် တောထဲရှေ့တန်း အပို့ခံရပါတယ်။ သာကေတ ကျောက်တိုင်ကနေ ကုန်းကျော်တံတားဘက်အတက်မှာ ဘုန်းကြီး (၂) ပါးနဲ့ အဲဒီနောက်မှာ လူထု (၁၀) ယောက်လောက် အေးအေးဆေးဆေး လာနေတဲ့ဟာကို တပ်မ (၂၂ ) ကဘဲ ပစ်သတ်ခဲ့ပါတယ်။
အရေးအခင်းကာလမှာ လူထုကိုပစ်တာကို စစ်မြေပြင်မှာ တိုက်တာထက် သူတို့ပျော်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ တချို့တပ်မှူးတွေ ရဲဘော်တွေဆို လူထုကိုကြည့်ပြီး မျက်ရည်ကျခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကဆို လူထုအပေါ် အနိုင်ကျင့်ချင်တိုင်း ကျင့်နေပါတယ်။ ဒီအပြုအမူဟာ ရန်ကုန်မြို့် အရေးအခင်းကာလ တာဝန်ကျနေတဲ့ တပ်ရင်းတိုင်းလိုလိုပါဘဲ။ တချို့ တပ်မှူးတပ်သားတွေဟာ လူထုအပေါ် အနိုင်ကျင့်၊ အမြတ်စားဆိုတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို လုံးဝလက်မခံတာလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ တချို့ တပ်မှူးငယ်တွေဆို မကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို တားမြစ်လို့ ပါးရိုက်ခံရပြီး အရေးယူခံရတာရှိသေးတယ်။
(၈၈) ခုနှစ်ကုန်တဲ့အချိန်ထိ အင်းစိန် အာအိုင်တီကျောင်း အုတ်နံရံမှာ ကျည်ဆံထိထားတဲ့အရာတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ သွေးကွက်တွေ ခြောက်ကုန်ပြီး ရေနဲ့မဆေးထားပါ။ အရေးအခင်းကာလမှာ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ တကယ်သေသူတွေရော မသေမရှင်လူတွေကိုပါ ကျင်းထဲကို ကားနဲ့သွန်ချတာ သောင်းဂဏန်းလောက် ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကိုယ်တွေ့အဖြစ်မှန်ကို ရေးသားပေးပို့လိုက်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မီရှင်မှ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်သော ယင်းအရည်ချင်း ပျက်ယွင်းသူ အမည်စာ ရင်းတွင်ချင်းပြည်နယ်မှ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသော ချင်းတိုးတက်ရေး ပါတီမှ ၃ ဦး၊ချင်းအမျိုးသားပါတီမှ ၃ ဦး၊ တိုင်းရင်း သား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီမှ ၆ဦး၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုမှ ၁ ဦး၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိူးသား နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ချူပ် မှ ၁ ဦး နှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိူးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီမှ ၁ ဦး တို့ပါဝင်သည်ဟုချင်းသတင်းဌာနမှာရေးသားသည်၊
သျှမ်းပြည်တပ်မတော်(မြောက်)နှင့်ဗမာတပ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား၊အနည်းဆုံး ၃ ယောက်ထက်မနည်းသေကြေဒဏ်ရာရ(ကြာဖြတ်သတင်း)
သျှမ်းပြည်တပ်မတော်(မြောက်)နှင့်ဗမာတပ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား၊အနည်းဆုံး ၃ ယောက်ထက်မနည်းသေကြေဒဏ်ရာရ (ကြာဖြတ်သတင်း)
ပင်လုံးအခြေစိုက်ဗမာစစ်တပ် ခလရ ၅၁၃နှင့်သျှမ်းပြည်တပ်မတော်တပ်တွေဟာကဲဆီမြို.နယ်၊ဟိုနမ်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပါသည်၊ဗမာစစ်တပ်ဘက်ကနည်းနည်းအထိနာတဲ့သတင်းရှိနေပြီးမြို.နယ်အနီးအနာတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဗမာတပ်အင်းအား ၅၀၀ ထက်မနည်းကိုလည်းထပ်ပို.ထားသည်ဟုသိရှိရပါသည်၊တိုက်ပွဲကဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနိုင်မည့်အလာအလာရှိနိုင်သည်ကိုလည်းသတင်းရရှိပါသည်၊
ငလျင်လှုပ်မှုကြောင့်နျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံးစက်ရုံနှစ်ရုံတွင်ဓါတ်ပေါင်းဖို ၅ ခုအန္တရာယ်ရှိ
သောကြာနေ.အင်းအားပြင်းထန်တဲ့ငလျင်လှုပ်မှုကြောင့်အအေးပေးစနစ်ပျက်စီးသွားတဲ့ဖူခူရှီမာဒိုင်ချိရှိအမှတ်(၁)နျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံးစက်ရုံတွင်အပူချိန်လွန်အရည်ပျော်နေသလားကိုတာဝန်ရှိသူများကစစ်ဆေးနေကြောင်းရိုဟိုင်းရှီအိုမိ Ryohei Shiomi ကပြောကြားခဲ့ပါသည်၊အကယ်၍အပူချိန်လွန်အရည်ပျော်ဖြစ်သော်လည်းကီလိုမီတာ ၁၀ ပတ်လည်အလွန်မှာနေထိုင်သည့်လူသားတွေကိုထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို.ရှီအိုမိကပြောပါသည်၊
အနီးအနာပတ်လည်တစ်ဝိုက်မှာနေထိုင်နေသည့်လူဦးရေ ၅ သောင်းတစ်ထောင်လောက်ကိုပြောင်းရွှေ.ခိုင်းလိုက်ပြီလို.လည်းသူကဆက်ပြောပါသည်၊
အအေးပေးနိုင်စွမ်းပျက်စီးမှုကြောင့်အဏုမြူစွမ်းအင်သုံးစက်ရုံနှစ်ရုံတွင်ရှိအဏုမြူဓါတ်ပေါင်းဖို ၅ ခုအတွက်ဒီကနေ.မနက်ပိုင်းမှာဂျပန်အစိုးရကအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာလိုက်ပါပြီ၊ဒိုင်ချိရှိအဏုမြူစွမ်းအင်စက်ရုံကိုနိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာလိုက်တာဟာဂျပန်သမိုင်းမှာဒါကပထမဦးဆုံးဖြစ်သည်၊အစိုးရအနေနဲ.ဒီလိုကြေညာပြီးနောက်နာရီပိုင်းအာကြာမှာပင် ဒိုင်ချိမှာရှိတဲ့ဓါတ်ပေါင်းဖို ၆ နေရာအတွက်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပို.ဆောင်ပေးနေသည့် Tokyo Electric Power Co ကဒိုင်ချိမှာဒုတိယမြောက်ဓါတ်ပေါင်းဖိုတစ်ခုနှင့် Fukushima Daichi အနာတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့အခြားသောဓါတ်ပေါင်းဖို ၃ ခုတို.ကိုလည်းအအေးပေးမှုစနစ်ပျက်စီးကြောင်းထပ်ကြေညာခဲ့ပါသည်၊အစိုးရကလည်းထိုနေရာသုံးခုတို.ကိုလည်းအရေးပေါ်အခြေအနေအလျင်စလိုကြေညာပြန်ပါသည်၊ဒိုင်ချိမှာအခြေနေကထိတ်လန်.ဖွယ်ကောင်းပါတယ်၊တွန်းအားပုံမှန်ထက်နှစ်ဆတိုးပွားနေကြောင်ဂျပန်နျူကလီးယားလုံခြုံရေးဌာနကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်၊နိုင်ငံတကာအဏုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်ရဲ.ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာတော့ ဖူခူရှိမာဒိုင်ချိမှာရှိတဲ့နျူကလီးယားစွမ်းအင်စက်ရုံဟာအအေးပေးစနစ်ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက်ဒီဇယ်ဓါတ်ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ စက်ကဆူနာမိရေလွှမ်းမှုကြောင့်အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးလို.ဖော်ပြထားပါသည်၊
ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရောင်ဝယ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ဓါတ်ပေါင်းဖိုပေါင်း ၅၄ ခုရှိပြီး ငလျင်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာ ၁၀ ခုကိုတော့အလိုအလျောက်ပိတ်သွားပါသည်၊ဂျပန်နိုင်ငံဟာနျူကလီးယားစွမ်းအင်ကနေလျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်မှု ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိနေကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ငလျင်လှုပ်ဒဏ်၊ဆူနာမိဒဏ်ကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံဟာ လေထုအဆိပ်သင့်မှုဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးကင်ဆာရောဂါများ၊အသက်ရှူလမ်းကြောင်ပိတ်ရောဂါများနှင့်အကယ်၍နျူကလီးယားအပူချိန်လွန်အရည်ပျော်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်မှုမလုပ်နိုင်ပါကရောဂါမျိုးစုံဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးရောဂါကပ်ဆိုက်ရောက်သွားနိုင်သည်၊တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မအပေါင်းတို.ခင်ဗျား၊မိမိတို.တိုင်းပြည်ကိုပြန်လာပြီးအဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုခုအတွက်အသက်စွန်.လွှတ်နိုင်ပါစေ၊ Live for Nothing, Die for Something.
စာမေးပွဲဖြေနေစဉ် မီးမလာ၍ ကျောင်းသားများဆန္ဒပြ
March 9th, 2011 IMNA news
ကျလွန်းထော – (၁၀) တန်းကျောင်းသားများ စာမေးပွဲဖြေဆိုနေစဉ် မီး၂ ရက် ဆက်တိုက် ပျက်သွားသည့်အတွက် မော်လမြိုင် တက္ကလိုလ်မှ ကျောင်းသား ၅၀ ဦးတို့က ယမန်နေ့ည ၈ နာရီခန့်တွင် ဆန္ဒပြကြသည်။
မော်လမြိုင်တက္ကလိုလ် (ဓာတ်ပုံ- လွတ်လပ်သော မွန်သတင်း အေဂျင်စီ)
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကျောင်းသားများ စာမေးပွဲစတင်ဖြေဆိုသည့် မတ်လ ၇ ရက်နေ့နှင့် ၈ ရက်နေ့ မီးဆက်တိုက် ပျက်သည့်အတွက် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများက မော်လမြိုင်မြို့ ငန်းတေးရပ်ကွက်ရှိ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံနှင့် မန္တလေးရပ်ရှိ မြို့နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း ဆန္ဒပြခဲ့သည့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဦးက ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ ငန်းတေးမီးစက်ကို အရင်သွားတယ်၊ အဲဒီအရှေ့မရောက်ခင် ဆိုင်ကယ်အိပ်ဇော့အသံကို အသံကုန်ဖွင့်တယ်၊ ပြီးတော့ အပြင်ကနေ ကျောက်ခဲတွေနဲ့ ပစ်တယ်၊ အဲဒီမှာ ၁၀ မိနစ်လောက်နေတယ် ပြီးမှ မြို့နယ်အင်ဂျင်နီယာရုံးဘက်ကို လှည့်သွားတယ်၊ အဲဒီအတိုင်းပဲ ပြန်လုပ်တယ်၊ ကျနော်တို့ နှစ်ပတ် ပတ်လိုက်တယ်” ဟု ၄င်းကျောင်းသားက ပြောသည်။
မြို့နယ်အင်ဂျင်နီယာရုံးကို ကျောက်ခဲ့ဖြင့် ပစ်ခဲ့ခြင်းကြောင်း ရုံးရှိပြတင်းပေါက်မှန်များ ကွဲအက်မှုကြောင်း ယခုချိန်ထိ အာဏာပိုင်တို့ဘက်မှ တစုံတရာ လုပ်လာခြင်းမရှိသေးကြောင်း ၄င်းက ပြောသည်။
အရေးကြီးသည့် စာမေးပွဲဖြေစဉ်ကာလအတွင်း မီးဖြတ်လိုက်သည့်အတွက် ဆန္ဒပြရန် လူစုရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးဆောင် ဆန္ဒပြခဲ့သည့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဦးက ပြောသည်။
ထိုသို့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများဆန္ဒပြပြီးနောက် ယနေ့နံနက် (မတ်လ ၉) ရက်နေ့မှာ မီးပုံမှန် ပြန်လာနေပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုလိုကျောင်းသားများ ဆန္ဒပြခြင်းအပေါ် အာဏာပိုင်တို့ဘက်မှ တစုံတရာ ပြောကြားခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းမရှိသေးကြောင်း မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေရှိ အဆောင်မှုးတစ်ဦးက ပြောသည်။
“အခုချိန်ထိ ဘာမှ မပြောသေးဘူး၊ အစိုးရကနေပြီးတော့ ပါမောက္ခကို သွားပြောတာလည်း မကြားသေးဘူး၊ ဒီနှစ် ကျောင်းမဖွင့်ခင်တုန်းကလည်း ကျောင်းသားတွေ တစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင် ကျောင်းသားနဲ့ မဆိုင်ဘူး၊ အဆောင်မှူးတွေမှာပဲ တာဝန်ရှိတယ်၊ အဆောင်မှူးတွေ တာဝန်ယူရမယ်လို့ ကျနော်တို့ အဆောင်မှူးတွေအားလုံးကို အစည်းအဝေးခေါ်တွေ့ပြီးသားပဲ၊ မီးကလည်း လာနေပြီးဆိုတော့ ကျနော်တို့ကို ခေါ်တွေ့မယ်မထင်ဘူး” ဟု ၄င်းအဆောင်မှူးက ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၀၉ ခုနှစ် မတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင်လည်း ၁၀ တန်းကျောင်းသားများ စာမေးပွဲမဖြေခင်၌ ယခုလိုမျိုး ၃ ရက်ဆက်တိုက် မီးမလာသည့်အတွက် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ၁၀၀ ကျော်တို့က မီးပြန်လည် ပေးဆောင်ရန် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုခဲ့သည်။
မာတ်ခ်ျလ (၂၅) ရက်နေ.၊ပြည်သူ.ဒေါသပေါက်ကွဲနေ. March 25, People's Anger Uprising Against Dictatorship in Burma
တစ်ယောက်ချင်းစီး၏ရပိုင်ခွင့်များနှင့်အများပြည်သူများအခွင့်အရေးအတွက်လာမည့် မာတ်ခ်ျလ (၂၅)ရက်မှာတိုက်ပွဲကြပါ၇န်ဖိတ်ခေါ်သည်။
မာတ်ခ်ျလ (၂၅)ရက်နေ.တွင်လွတ်လပ်မှု၊အပြောင်းအလဲ၊နှင့်တရားမျှတမှုအတွက်ပြည်သူလူထုများတိုက်ပွဲစမည်၊ Join US 25 March for Freedom, Change & Justice
(၃၁)ခေါက်မြောက်ပြေးဆွဲခဲ့ပြီးဖြစ်သော AN-148 လေယာဉ်ကိုမနှစ်တုန်းကချုပ်ဆိုထားသည့်စာချုပ်အတိုင်းဗမာပြည်ကိုပို.ပေးပို.သင်တန်းပေးရင်းပြုတ်ကျသွားလေယာဉ်(ဗွီဒီယို)
Walk Like An Egyptian အီဂျစ်တစ်ယောက်လိုလမ်းလျှောက်ပါ (သီးချင်)